လင်းသန့်| December 3, 2012 | Hits:297
8 | | နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ တို့တွေ့ဆုံနေစဉ် မုံရွာ ဒေသခံများက ကုမ္ပဏီရှေ့တွင် စောင့်ဆိုင်းနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေး အရှိန်မြှင့်ရန် တရုတ် သမ္မတ ပြောဆို
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ohnmar December 3, 2012 - 5:37 pm	တရုတ်နိုင်ငံက၁၀၀% ရင်းနှီးမြုပ်နှံတယ်ပြောပြီး ဦးပိုင်ကိုဘာဖြစ်လို့အကျိုးအမြတ်ခွဲ
Reply	Salai Lian December 3, 2012 - 10:15 pm	Suu Kyi has been reminding the world about this issue countless times. To invest responsibly is the her keyword. China has been trying to suck the blood of the whole world by crook or by hook. The Burmese generals love China because they share the same mentality and agenda. We do not want to see irresponsible companies like Chinese companies ruining our country and insult our people by helping the Burmese killers and ignore the voice of the public. This is only the beginning. Shwe Pipe issue will follow soon.
Reply	haha December 4, 2012 - 5:20 am	တာဝန်သိရင် ဒီလို ပြသနာ ဖြစ်လာစရာ ကို မရှိဘူး
Reply	အမြင်အကြား December 4, 2012 - 7:46 am	Responsible Investment ကိုမဖတ်မိလို့မသိလိုက်ပါဘူးထင်တယ်၊အိုင်ဗင်ဟိုး
Reply	min thura December 4, 2012 - 8:00 am	All the snakes in Government sectors are poisonous because they are same people from previous military government. Never never underestimate them.
Reply	သာကီသွေး December 4, 2012 - 10:27 am	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ဂေဟစနစ် ခရိုနီတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်
Reply	Moh Nwam December 4, 2012 - 8:11 pm	လက်ပံတောင်းတောင်တင်မဟုတ်ပါဘူး၊ ပအို့ဝ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာလဲ အာဏာ၇ ပအို့ဝ်လူကြီးတွေက မဲနယ်တောင်တစ်ခုလုံးမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သစ်တောတွေ၊ တောင်တွေ အကုန်လုံးကို သူတို့ လူနဲစုကောင်းစားရေးအတွက် အကုန်ဖျက်ဆီးနေတာပါဘဲ။ ဒါကိုရော လူထုက တားဆီးပေးကြပါ။ ပအို့ဝ်လူကြီးတွေက မဲဆွယ်တော့ မျက်နှာတစ်မျိုး၊ အာဏာရတော့ မျက်နှာတင်းတင်းနဲ့ ဘိန်းအခွန်ကောက်၊ လုပ်စား၊ လူကြားကောင်းအောင် UNODC နဲ့ ပေါင်းပြီး ကမ္ဘာကို လိမ်၊ ဒါတွေကို လူထုက ငြိမ်ခံမှာလား။ နမ့်တဘက်ချောင်းရေကလဲ သံတောင်၊ ကမ္ဘောဇဘိလပ်မြေ၊ နမ့်ပေါင်လင်းရဲ့ ခနောက်စိမ်းလုပ်ကွက် စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကြောင့် ညစ်ထေးနေပါပြီ။ဒါလဲ တရုပ်နဲ့ တို့ပအို့ဝ်လူကြီးတွေ ပေါင်းလုပ်စားနေတာပါဘဲ။ ရသာလျင် ဘနဖူး၊ သိုက်တူးဆိုတဲ့အထဲမှာ တို့ပအို့ဝ်တွေ အတ္တကြီးစွာ ပါလာနေပြီ။
Reply	မင်းကြီးညို December 12, 2012 - 4:57 am	ပအို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာလဲ ပအို့လူမျိုးစုတွေက ထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့